Soosaarayaasha batroolka 'photoluminescent'
Balaastikada Luminescent-ka Dufcaddii Dufcaddii Mashiinka balaastigga Luminescent plachics waa nooc ka mid ah sheyga balaastigga oo leh astaamaha is-dhalaalashada. Cirbadda, fidinta iyo naqshadeynta dharbaaxada, waxaad si toos ah ugu adeegsan kartaa xaashiyaha caaga ah ee loo yaqaan "ptoluminescent pellets" si toos ah si aad uga dhigto alaabooyin caag ah.
Photoluminescent master cufan -Plastic ashyaa auxeriary granule Glow kuleylka mugdiga ah Waxaan u isticmaali doonaa ifka ugufiican ee budada laydhka kuu leh si aad u soosaarto iftiinka ifaya, ifka wanaagsan. Waxaan kula dhisidoonaa wada-xiriir wanaagsan, alaabadaada iyo qalabkaaga si khaas ah u dhisi doona kuwa kugu habboon. Waxaan qabnaa shaqo wanaagsan oo ah adeegga iibka ka dib, hawlgalladaada soo-saarka si aan u bixinno talo-bixin macquul ah oo waqtigeedu dhacey. 1. Waqti-kaydinta-gaaban: 10 ilaa 20 m ...
Waa maxay sababta Dooro Ku iftiimin qariidada halka aad ka isticmaali lahayd budada nalka leh?
Cufnaanta gaarka ah ee budada laambadda ayaa aad u sarreysa, way deganaan doontaa haddii si toos ah loogu qaso resin.
Waxay si fudud u leedahay jahawareer inta lagu guda jiro hawsha mudista si markaa sheygu u noqdo mid madow.
Masterbatch waxay leeyihiin is-waafajin wanaagsan sababta oo ah isku-xiraha isku midka ah ee alaabada khafiifka ah ee iftiinka leh iyo wax soosaarka plasctic.
Ku soo iftiimaya himilada mugdiga ah waxay leeyihiin kalasaarid wanaagsan iyo awood midab.
Budada iftiinka leh waxay leedahay soo nuugista biyaha sare, halka Masterbatch si wax ku ool ah u yarayn karto.
Way fududahay in la xisaabiyo saamiga qiyaasta, Masterbatch waa granule muuqaalka wihich waxay lamid tahay resin sidaa darteed waxay u balan qaadi kartaa soo saarista miisaanka.
7) Deegaanka-u habboon, adeegsiga istiraatiijiyaddu waxay ka fogaan kartaa wasakhowga boodhka, waxay u fiican tahay hawl wadeennada caafimaadka.
Mashiinnada caaga ah ee loo yaqaan 'photoluminescent caarada' ee loo yaqaan 'photoluminescent pellets' waxay gaar ahaan yihiin resins gaar ah sida PP, PE, ABS, PC, PVC iwm. Qiyaasta boqolleydayada ah ee midabka loo yaqaan 'photoluminescent pellets caaga ah' wuxuu ka bilowdaa 20% ilaa 50%. Iftiimintaada iyo waqtiga soo socda ee alaabadaada dhamaaday naftaada ayaa la hagaajin karaa adoo kudareynaya resins dheeraad ah xeryaha.